स्थानीय तह व्यवस्थापन बाँकी - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तह व्यवस्थापन बाँकी
query_builderMarch 8, 2017 10:35 AM supervisor_accountभगवान खनाल visibility231
काठमाडौं: स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन सरकारले पारित गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी छ । मंगलबार पनि मुद्रण विभागमा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्रकाशनको लागि गएको छैन ।
आज (बुधबार) सार्वजनिक बिदा परेकाले मुद्रण विभागमा जाने सम्भावना छैन । राजपत्रमा जान अझै दुईदिन लाग्ने देखिन्छ । संवैधानिक आयोगले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले परिमार्जनसहित पारित गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर विचाराधीन रहे पनि राजपत्रमा उक्त प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न फरक नपर्ने वरिष्ठ कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
उता, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आउने छन् भने तिनले काम गर्ने गरी ऐन, नियम तथा कार्यविधि आउन बाँकी छ । स्थानीय तह व्यवस्थापन ऐन छिटो आउनु पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
उनले जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कार्यालय र पूर्वाधार चाहिने बताए । उनी भन्छन्, “यसको व्यवस्था गर्न पनि बाँकी छ । जनप्रतिनिधिको कामका लागि न्यूनतम कर्मचारी व्यवस्था गर्न बाँकी छ । उनीहरू आएकै दिनदेखि कर्मचारी चाहिन्छ ।”
उनीहरूका काम कारबाही कसरी गर्ने, विधि कस्तो हुने भन्ने नियम चाहिने भन्दै सचिव थपलियाले यो कार्य पनि बाँकी रहेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
जनप्रतिनिधिले महिना दिनमा नै स्थानीय तहको परिषद् गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले बजेटको खाका पनि बनाउनु पर्ने हुँदा त्यसको प्रबन्ध गर्न आवश्यक खाका चाहिने थपलियाले बताए ।
स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अझै धेरै कार्य बाँकी छ । कर्मचारी खटाउने, कार्यालय खोल्ने, बजेट पठाउने काम तुरुन्तै गरिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।
स्थानीय तह सरकार भएकाले यसको सञ्चालन गर्न न्यूनतम जनशक्ति, स्रोतसाधन, वित्तीय नीति चाहिने भएकाले यसको पनि खाका बनाउन बाँकी छ । यी सबैका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने थपलिया बताउँछन् ।
आइतबार सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेसँगै विद्यमान स्थानीय निकायको पहिचान सकिँदै छ । सरकारले मंगलबार प्रतिवेदन राजपत्रमार्फत प्रकाशन गर्न लगेको छ ।
राजपत्रमा प्रतिवेदन प्रकाशन भएसँगै विद्यमान स्थानीय तहका नामसँगै लेटरप्याड र होर्डिङ बोर्ड पनि परिवर्तन हँुदैछ । स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अझै धेरै कार्य बाँकी छ ।
कर्मचारी खटाउने, कार्यालय खोल्ने, केही बजेट पठाउने काम तुरुन्तै गरिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।
स्थानीय तहको सम्पति र दायित्व के गर्ने भन्ने छ । गाविस र नगरपालिकाको आर्थिक दायित्व कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने रहेको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए ।
भर्खरै उद्योग मन्त्रालय सरुवा भएका नेपालको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला विकास समितिको भूमिका जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भएकाले उसले गर्दै आएका कार्य तथा विविध ठेक्कापट्टाका कार्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
यस्तै अबको आर्थिक ऐन, राजस्व परिचालन, ऋण दायित्व के भन्ने छ । आर्थिक, भौतिक दायित्व के हुने भन्ने प्रश्न यथावत छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना पारित भएसँगै केही प्राविधिक कार्य अझै बाँकी रहेकाले छिटो गनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन तयारीको मुखमा भएको स्थानीय पुनःसंरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो बाँकी नै छ । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार तयार पारिएको अधिकारको अनबन्डलिङ (खण्डीकरण) पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । मैदानको रूपमा मानिएको अधिकार सूचीको खण्डीकरण स्वीकृत भएर सरकारले पारित गरिसकेको छ ।
हाल मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय र ती मातहतका निकायले आफ्नो संरचना र संगठन परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा लाग्ने मानवस्रोत व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहलकदमी थाल्नु पर्नेछ ।
यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासले कर्मचारीको संगठनात्मक संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी दुवै कार्यमा समन्वय र निर्देशन गर्नुपर्ने छ ।
प्रशासनिक संरचना र मन्त्रालयको संख्या र संरचना संघ र प्रदेशमा कति चाहिने भन्ने कार्यसंरचना तय गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहको संरचनागत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
यी दुवै काममा समन्वय गर्न सचिव थपलियाको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनेको छ । यसैगरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र तहगत जिम्मेवारीको काम भए पनि अझै सुषुप्त अवस्थामै छ ।
थपलियाले भने, “सुषुप्तै अवस्थामै भए पनि राज्यले भनेअनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्न कर्मचारी प्रशासनले काम गरेको छ ।” स्थानीय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका–संसद्मा गएको छ, यो तुरुन्तै चाहिने देखिन्छ ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि अन्तरिम व्यवस्था पारित गरेकाले यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । यस्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजनको काम बाँकी छ । स्थानीय तहले विभिन्न नियमावली बनाउने सम्बन्धी खाका बनाउनु पर्ने कार्य बाँकी छ ।